(SAWIRRO) Shir-weyne ku saabsan doorka haweenka ee waxbarashada sare Puntland Oo Ka Furmay Garowe | puntlandi.com
(SAWIRRO) Shir-weyne ku saabsan doorka haweenka ee waxbarashada sare Puntland Oo Ka Furmay Garowe
Garowe (Puntlandi) Machadka horumarinta cilmi baarista Soomaaliyeed ee SIDRA, ayaa maanta magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ku daah-furay shir-weyne looga arrinsanayo doorka haweenka ee waxbarashada sare Puntland.
Shirkaan oo socondoono muddo saddex cishe ah ayaa diirada lagu saaridoonaa aqoon-is-dhaafsi ku saabsan dhibaatooyinka ballaaran ee ay la kulmaan haweenka baraayaasha ah, iyadoo diirada la laga eegayo xaga xirfadaha, shaqaaleynta iyo dalacsiinta dumarka barayaasha ah iyo sidoo kale arimaha cilmi baarista dumarka macalimiinta ah ee ku nool Soomaaliya.
Waxaa shirweynahaan lagu casuumay barayaal gabdho ah oo ka kala socday jaamacaddaha kuyaala Puntland iyo gobolada kale ee Soomaaliya, kuwaas oo door muhiim ah ka qaadanaya barnaamijkaan lagu falanqeynayo dumarka iyo waxbarashada sare. Waxaa sidoo kale ka qeyb galay madaxda SIDRA iyo wasiir ku xigeenka waxbarashada Puntland, Dr Maxamed Cali Faarax.
Hamdi Omar Hassan, oo bare ka ah jaamacada Hilal ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay gabadhaha Soomaaliyeed inay aad ugu yar yihiin ka qeyb galka waxbarashada, taasoo sabab u ah inayan si fiican uga muuqan goobaha shaqada sida Ragga, maadaama ay badankooda wax baran. Waxaa kale oo ay sheegtay xitaa haddii ay gabdhuhu meel sare ka gaaraan aqoonta inay dhif yahay in la arko gabadh madax ah ka ah shirkad, marka laga reebo inay share ku leedahay shirkadaas.
Agaasimaha Machadka SIDRA, Gulled Salah Bare, ayaa sheegay shirkaan inay u qabteen sidii la isaga kaashan lahaa hal u helida caqabada hortaagan haweenka baraayaasha ah iyo in kor loo qaado fursadaha waxbarashada gabdhaha, si meel sare ka gaaraan aqoonta iyo inay ka faa’idaystaan shaqaaleynta iyo dalacsiinta.
Waxaa kaloo uu sheegay macalimiinta oo lagu sameeyo qiimayn inay marka dambe horseedayso in au horumargto kartida ardayda.
Wasiir ku xigeenka waxbarashada dowladda Punland, Dr, Maxamed Cali Faarax oo furay shirkaan ayaa sheegay inay gabadhuhu 39% ka marayaan heerka waxbarashada tacliinta sare, taasoo aad uga badan mar loo eego burburkii dowladdii dhexe kadib. Wasiir ku xigeenku wuxuu sheegay tilmaamay sababta ay gabduhu ugu yar yihiin tacliinta sare inay tahay taageero la’aanta dhaqaale iyo jaamacadaha dalka oo ku kooban magaalooyinka kaliya.
Dr. Maxamed Cali Faarax wuxuu usoo dhoweeyay barnaamijkaan ay SIDRA hogaaminayso ee looga hadlayo doorka haweenka ee waxbarashada sare Puntland, wuxuuna sheegya inay ahmiyad weyn leedahay in sare loo qaado xirfada iyo tayada dhabdhaha macalimiinta ah. si ay ugu fududaato inay ka faa’idaystaan fursadaha shaqooyinka.